Moto G5s Plus (32GB)
သင်လိုအပ်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ လိုအပ်ချက်တွေ အားလုံးကို ကျယ်ပြန့်သော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တွေ့ကြုံခံစားနိုင်စေဖို့ သက်သာသောဈေးနှုန်းဖြင့် Motorola မှ G5 Plus MOBILE Phone က စွမ်းဆောင်ပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါသည်။မြင့်မားသော resolution ရှိတဲ့ မျက်နှာပြင်ဟာ ကြည်လင်တောက်ပပြီး အကောင်းဆုံးသော ရုပ်ထွက်ကို မြင်တွေ့ခံစားနိုင်မှာဖြစ်သည်။ရုပ်ရှင်ကြည့်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဂိမ်းဆော့တာပဲဖြစ်ဖြစ် စာဖတ်တာ အင်တာနက်အသုံးပြုတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ကြင်လင်ပြတ်သားသော မြင်ကွင်းများကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။တိကျ မြန်ဆန်လျင်မြန်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် သင့်ဖုန်းကို အနီးမှာပဲ ထားချင်တော့မှာပါပဲ။ အဆင့်မြင့် processor ပါဝင်သောကြောင့် ဖုန်းလုပ်ငန်းဆောင်တာများဟာ လျင်မြန်နေမှာ ဖြစ်သည်။ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော Memory ပါဝင်သောကြောင့် မိမိကြိုက်နှစ်သက်သော ဖိုင်များ ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ သီချင်းများ၊ ဗီဒီယို ဖိုင်များကို အကန့်အသတ် မရှိထည့်နိုင်မှာ ဖြစ်သည်။
OS: Andorid OS v7.1(Nougat)
Camera: Primary - Dual 13 MP
Resolution 1090x1920 pixels
Color - Gold and Gray
E4 Plus 4G Dual Sim
သင်လိုအပ်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ လိုအပ်ချက်တွေ အားလုံးကို ကျယ်ပြန့်သော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တွေ့ကြုံခံစားနိုင်စေဖို့ သက်သာသောဈေးနှုန်းဖြင့် Motorola မှ E4+ MOBILE Phone က စွမ်းဆောင်ပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါသည်။မြင့်မားသော resolution ရှိတဲ့ မျက်နှာပြင်ဟာ ကြည်လင်တောက်ပပြီး အကောင်းဆုံးသော ရုပ်ထွက်ကို မြင်တွေ့ခံစားနိုင်မှာဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဂိမ်းဆော့တာပဲဖြစ်ဖြစ် စာဖတ်တာ အင်တာနက်အသုံးပြုတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ကြင်လင်ပြတ်သားသော မြင်ကွင်းများကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။တိကျ မြန်ဆန်လျင်မြန်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် သင့်ဖုန်းကို အနီးမှာပဲ ထားချင်တော့မှာပါပဲ။ အဆင့်မြင့် processor ပါဝင်သောကြောင့် ဖုန်းလုပ်ငန်းဆောင်တာများဟာ လျင်မြန်နေမှာ ဖြစ်သည်။ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော Memory ပါဝင်သောကြောင့် မိမိကြိုက်နှစ်သက်သော ဖိုင်များ ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ သီချင်းများ၊ ဗီဒီယို ဖိုင်များကို အကန့်အသတ် မရှိထည့်နိုင်မှာ ဖြစ်သည်။
OS - Android Version 7.1.1
Moto Z2 Play 4G Dual Sim - Gold
With all the features you need,Motorola Z2 Play ensures you get the fantastic mobile experience of all time.Beautiful and fantastic wide-screen Display high Resolution powers your day with the best graphics performance. It’s Ideal for watching HD movies, playing games, browsing the web, or reading and gives you the best visual experience. Unlimited Entertainment is the bonus. Equipped withahigh mp of camears with auto focus, it guarantees you capture every moment of your day beautifully.Uncompromising Performance that offers, you will be unstoppable. Featuringapowerful and robust processor, it provides the most speedy experience for multi-tasking: read E-books, watching videos, listening to music, etc. With huge storage and ram , you can put everything you love into this incredibly sleek and portable design and enjoy your time with this little tablet or get work done, wherever and whenever you want.
Operation System - Android Version 7.11
Processor - Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53
Gift - Temper Glass + Silcion Cover + Moto Gift Box + Moto VR Mod
Moto Z2 Play 4G Dual Sim - Grey
Moto X Play (4G) - Black
Moto X Play will be your perfect match for your daily lifestyle. With water-repellant design and more thanaday of battery life, you can do more - day and night, rainy days or sunny days. Its 21 MP camera can take stunning photos, and the full HD screen can display sharp images and videos. And Motorola Shells will make you express your unique style.
With Motorola X Play, you'll be able to play longer and more adventurously. Moto X Play’s water-repellent coating shields it from the inside out. And the battery will last as long as you do.
With rapid focus and colour-adjusting flash, you'll be able to capture clear pics using the 21 MP camera. The 5.5” HD screen with 1080p resolution will give you stunning clarity.
Smart software and pure Android experience
With Moto software, your Moto X Play can be taught how to work best for you. And you’ll love the efficient simplicity of the latest pure, clutter-free Android™ OS.
Operation System - Android OS, v5.1.1 (KitKat)
Battery - 3630 mAh battery
Back Camera - 21 MP
Processor - Hexa-core 1.7 GHz
Gift Items - Moto Gift Box
Motorola Moto Z2 Force (Dual Sim) 4G - Black
သင်လိုအပ်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ လိုအပ်ချက်တွေ အားလုံးကို ကျယ်ပြန့်သော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တွေ့ကြုံခံစားနိုင်စေဖို့ သက်သာသောဈေးနှုန်းဖြင့် Motorola မှ Moto Z2 Force က စွမ်းဆောင်ပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါသည်။မြင့်မားသော resolution ရှိတဲ့ မျက်နှာပြင်ဟာ ကြည်လင်တောက်ပပြီး အကောင်းဆုံးသော ရုပ်ထွက်ကို မြင်တွေ့ခံစားနိုင်မှာဖြစ်သည်။
ရုပ်ရှင်ကြည့်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဂိမ်းဆော့တာပဲဖြစ်ဖြစ် စာဖတ်တာ အင်တာနက်အသုံးပြုတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ကြင်လင်ပြတ်သားသော မြင်ကွင်းများကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။တိကျ မြန်ဆန်လျင်မြန်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် သင့်ဖုန်းကို အနီးမှာပဲ ထားချင်တော့မှာပါပဲ။ အဆင့်မြင့် processor ပါဝင်သောကြောင့် ဖုန်းလုပ်ငန်းဆောင်တာများဟာ လျင်မြန်နေမှာ ဖြစ်သည်။ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော Memory ပါဝင်သောကြောင့် မိမိကြိုက်နှစ်သက်သော ဖိုင်များ ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ သီချင်းများ၊ ဗီဒီယို ဖိုင်များကို အကန့်အသတ် မရှိထည့်နိုင်မှာ ဖြစ်သည်။
Gift - Temper Glass + Moto Z2 Froce Gift Box + Moto VR Mod
MicroSD - Up to2TB
Sim - Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)4G LTE
Front Camera - Dual 12MP IMX 386 sensors
CPU - Octa-core 2.35 GHz
Resolution - 1440 x 2560 pixels QHD